I-iOS 16 iza kuzisa ngakumbi iimpawu zabucala ngokwandisa iCloud Private Relay | Iindaba ze-iPhone
Ingelosi Gonzalez | 30/04/2022 13:00 | iOS 16
iOS 16 Ifikeleleka kuko konke ukuvuza kunye namarhe kwezi veki zidlulileyo. Kukho ngaphantsi nangaphantsi de i-WWDC22 ifike kwaye sibona zonke iindaba zenkqubo entsha yokusebenza ye-apile enkulu. Ngesi sihlandlo, iingxelo zamva nje zibonisa ukuba ICandelo labucala le-iCloud (okanye iCloud Private Relay ngeSpanish) iya kwandisa imisebenzi yayo kuyo yonke i-iOS 16 ukuzisa ubumfihlo bomsebenzisi obuphuculweyo kuyo yonke indlela yokusebenza. Kusenokwenzeka ukuba umsebenzi awusayi kuba kwimowudi ye- "beta" njengoko ngoku ikwi-iOS 15 ukwenza indlela yohlobo oluqinisekileyo oluneendaba ezibalulekileyo kwi-iOS 16.
I-iCloud Private Relay iya kwandisa iimpawu zayo kwi-iOS 16
Umsebenzi ophambili we-iCloud Private Relay usekwe kwi uxhulumaniso lwethu luphuma kwiiseva ezimbini ezahlukeneyo. Ngale bounce, oko kuhloswe kukufihla iirekhodi ze-IP kunye ne-DNS esidibaniswe nazo kwiiwebhusayithi zangaphandle. Okwangoku, i-iOS 15 inale nkqubo kwi-beta ngobhaliso lwe-iCloud + olubandakanyiweyo kwizicwangciso ze-iCloud. Nangona kunjalo, iCloud Private Relay isebenza kuphela Safari.
Ngokwengxelo epapashwe yi idayiday, UApple usenokuba ucinga ngayo ukwandisa iCloud Private Relay kuzo zonke iOS 16 uqhagamshelo. Oko kukuthi, lonke uqhagamshelo lwe-Intanethi olushiya i-iDevice yethu luya kuguqulelwa ngokuntsonkothileyo ibuya ukusuka iCloud relay: apps zomntu wesithathu, iinkonzo zomntu wesithathu, iibhrawuza ngaphandle kweSafari, njl. Oku kuya kuthetha utshintsho olubaluleke ngokwenene kuba uninzi lweenkampani zokulandelela zifumana imali ngolwazi olunxulumene nee-IP zethu kunye nolunye uhlobo lomxholo abanokuthi bawukhuphe kuqhagamshelwano.
Nangona kunjalo, yi- inyathelo elibalulekileyo ekuphuculeni ubumfihlo bomsebenzisi Emnatheni. Ukongeza, izinto ezimbalwa ezintsha kulindeleke ukuba zifike kwinto ebizwa ngokuba yi-iCloud Private Relay bundle ngaphaya koqhagamshelo. Masikhumbule ukuba ngaphakathi kolu luhlu kukho ukhetho 'lokufihla imeyile' apho i-Apple yenza ii-imeyile ezingakhethiyo ezithumela kwakhona kwi-imeyile yethu ephambili, phakathi kweminye imisebenzi. Oku kuya kuthatha inyathelo eliya phambili kwi-iOS 16 ngokuvelisa ukhuseleko lwabasebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 16 » I-iOS 16 iya kuzisa amanqaku abucala ngakumbi ngokwandisa i-iCloud Private Relay
Sityelele i-Apple Park eCupertino, la ngamava ethu
I-Apple kuphela efezekisa amanani afanelekileyo kwiintengiso ze-smartphone ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka